Botanik Ferienhaus (HolidayInn) - I-Airbnb
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguNuri
Indlu yam ikwintliziyo yendalo enemithi yeorenji eninzi, ilamuni kunye nerharnati. Kwigadi yayo, unokungqina ukuba zikhule njani i peanut, strawberry, tomato etc. Unganceda kwaye uzitye zintsha simahla!
Andiyiphathi indlu yam njengemotele okanye indlu yeendwendwe. Xa ungena, ikhitshi, ithala kunye negumbi lokuhlambela ziya kuba zezakho zonke.
Sikulanda kwisikhululo seenqwelomoya simahla. Kukho i-bazaar enkulu yokuthenga kufutshane nendlu yethu ehamba imizuzu emi-5, apho ungafumana yonke into.
Ngaba ufuna ukuba neholide ezolileyo, epholileyo ejikelezwe yiorenji, irharnati, ilamuni, iidiliya, imithi yomnquma kwindawo enoxolo apho unokubona indlela iitumato, iipepile, iikomkomere, iivatala, amandongomane, amaqunube, njl.njl.
Sonke isiqhamo kunye nemifuno kwigadi yethu yeyakho, simahla. Unokuzikhetha zintsha kwisebe lazo, okanye uzifumane njengezimuncumuncu. Unokusebenza nasegadini ukuzonwabisa kunye nokuzonwabisa.
Imigangatho ye-II kunye ne-III ihlangene kunye ne-dublexes. KuMgangatho we-II, kukho i-terrace ebanzi (40 m2), kunye nekhitshi elibanzi elinendawo yomlilo enkulu. Umgangatho III ubekelwe amagumbi okulala kuphela. Kukho amagumbi amabini ane-balcony yawo, wc. kunye negumbi lokuhlambela. Kwaye kukho amagumbi amabini ane-balcony, i-wc, kunye negumbi lokuhlambela.
Ungasela ikofu yakho ujonge uhlaza olungapheliyo kwibalcony yakho.
Indlu yethu inefenitshala. Awuyi kufuna enye into. Nceda uze nomthwalo wakho kuphela.
I-Botanik Ferienhaus yimizuzu emi-5 ukuya elunxwemeni ngebhayisekile. Iibhayisekile unokuzisebenzisa simahla.
Ngaselunxwemeni, kukho iilwandle ezintathu, ezisimahla zikawonke-wonke, nganye ineeWC kunye neshawari. Unokufumana kwakhona iindawo zokutyela apha (kufuneka uhlawule ukutya kwakho kunye neziselo). Ngokukwanjalo, ecaleni kolwandle, ungafumana ikhosi yokukhwela ibhayisekile kunye nokubaleka eyi-3 kms ubude kwaye ijikelezwe buhlaza.
Ukulandela isidlo sakusasa, ungakhetha ukuhamba uye elunxwemeni ngemizuzu eyi-15. Singade sikuphakamisele elunxwemeni ngemoto yethu.
Emva kwesidlo sangokuhlwa, ngokunjalo, ukuba uthatha uhambo lwemizuzu eli-10, unokufikelela kwaye uthenge kwi-bazaar enkulu yokhenketho.
Umbuki zindwendwe ngu- Nuri
Umgcini wendlu ungumfundisi-ntsapho, ozelwe kwaye wakhulela kwicala elinye, iAlanya, imimandla yaseAntalya. Ukuba ufuna nantoni na, uya kufumaneka ukuze akuncede ngamaxesha onke.